AdraInformatica - टेक्नोलोजी, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, गाइड र एप्स
टेक्नोलोजी, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, गाईड र एप्स
August अगस्त, २०२० मा पोष्ट गरिएको
भिडियो खेल Bayonetta3गाइड
Bayonetta3तेस्रो किस्त, प्रोग्राम गरीएको छ र प्लेटिनमगेम्स द्वारा विकसित, प्रसिद्ध ह्याक र स्ल्याश गाथा प्रसिद्ध चुड़ैल को अभिनय को। भिडियो खेल Nintendo स्विच, Nintendo कन्सोल को लागी विशेष रूप बाट डिजाइन गरीएको हो।
एक भिडियो खेल अत्यधिक खेल को सबै प्रशंसकहरु को लागी सिफारिश Bayonetta 3. यो भिडियो खेल हो प्रत्येक पटक यो यसको अनुयायीहरु बीच बढि मान्यता प्राप्त हुन्छ र ती जो यो प्रयास गर्ने निर्णय। र यो राम्रो संग जानिन्छ कि Bayonetta3को एक खेल खेल्न अभूतपूर्व छ।
निम्न गाइड मा तपाइँ जानकारी पाउनुहुनेछ जसको साथ Bayonetta3खेल्न को लागी तपाइँ को लागी धेरै सजिलो हुनेछ। यसबाहेक, यो सुझाव छ कि खेल खेल्न को लागी एक कबूतर घोंडा बाट गिरिएको बिना शुरू गर्न को लागी छ, किनकि यद्यपि तपाइँ एक विशेषज्ञ बन्न सक्नुहुन्न, कम से कम तपाइँ आधारभूत कुराहरु सिक्नुहुनेछ।
खेलको प्रीमियर कहिले हुन्छ?
प्रशंसकहरूको लागि सबै भन्दा अपेक्षित मितिहरू मध्ये एक Bayonetta3es रिलीज मिति, यस समयमा भिडियो खेल जारी गरिनेछ र यो मा उपलब्ध हुनेछ कन्सोल-उपलब्ध। सबै भन्दा वांछित चीजहरु मध्ये एक ती सबै अवसरहरु कि यो उपलब्ध गराउने छ र समाचार जसको साथ यो निम्न जनता आश्चर्य हुनेछ जान्न को लागी हो।
Bayonetta3मा बाहिर उभिन को लागी सुझाव
त्यसैले यो उल्लेख गर्न सुरु गर्न उचित छ चाल छ कि तपाइँ को लागी उपयोगी हुनेछ, समय द्वारा Bayonetta3तपाइँको हात मा छ, तपाइँसँग धेरै राम्रा नतीजाहरूको साथ खेलहरू हुन्छन्। यी केहि हुन्।
अनुभव पाउनुहोस् र आफ्नो स्तर बढाउनुहोस्: सुधार र बाहिर खडा तपाइँ अधिक अवसर दिनेछन् र तपाइँ खेलाडीहरु को बाकी मा एक लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो कसरी तपाइँ माथि जानुहुन्छ र तपाइँको चरित्र को संभावनाहरु, साथै तपाइँको कौशल मा सुधार हुनेछ।
पत्ता लगाउनुहोस् जो Bayonetta3छ: त्यहाँ सूचना भन्दा राम्रो हतियार हुनेछ। दिमागमा राख्दै उपकरणहरु छन् कि भिडियो खेल बाधाहरु लाई पार गर्न को लागी तपाइँको निपटान मा राख्छ जति सक्दो चाँडो समस्याहरु को समाधान को लागी आवश्यक छ।
नयाँ रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्: यहाँ सम्म कि यदि तपाइँले एक बनाउनु भएको छ भने रणनीति जसको साथ तपाइँ सहज हुनुहुन्छ, नयाँ चीजहरु को प्रयोग बन्द नगर्नुहोस्, किनकि यसले तपाइँलाई उपयोगी प्रविधिहरु को खोज को संभावना दिन्छ कि तपाइँ सुधार गर्न मा मद्दत गर्दछ।
नियन्त्रण र सेटि settingsहरू अनुकूलित गर्नुहोस्: तीखोपन, नियन्त्रण र सबै सेटिंग्स तपाइँ तपाइँको लागी खेल्न सजिलो बनाउन को लागी परिवर्तन गर्नुहोस्। नियन्त्रण अनुकूलन तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु लाई खेल अनुकूलन को लागी अनुमति दिनुहुन्छ ताकि तपाइँको नतिजाहरु अझ राम्रो छ।
प्लेटफर्महरु जहाँ तपाइँ Bayonetta3को प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ
भाग्यवस, भिडियो खेल बिभिन्न कन्सोल र पीसी मा खेल्न सकिन्छ, तब, त्यहाँ संस्करण छ कि जारी गरिनेछ परीक्षण रोक्न कुनै बहाना छैन। कन्सोल मा यो खेल्न को लागी उपलब्ध गराइनेछ कि विकल्प को केहि हुनेछ प्लेस्टेशन y Xbox, जो संग तपाईं संग अवसर छ अन्य खेलाडीहरूसँग अनलाइन खेल्नुहोस् वा यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने स्थानीय रूपमा खेलहरू खेल्नुहोस्।
उही तरिकामा यो उपलब्ध हुनेछ क्लाउडमा खेल्नुहोस् पीसी को लागी भाप र Stadia जस्तै प्लेटफार्महरु को माध्यम बाट। उनीहरु को उपयोग गरेर तपाइँ को लागी विशेष सुविधाहरु संग बजार वा कम्प्यूटर मा नवीनतम कन्सोल को आवश्यकता छैन सुपर रमाईलो खेल छ.
के यसको रचनाकारहरु को लागी खोजिरहेका छन् कि सम्भव भएसम्म धेरै मानिसहरु Bayonetta ३ को पहुँच छ बिभिन्न संस्करणहरु मा जारी गरिनेछ कुनसँग खेल्ने सरल र रमाईलो हुनेछ, यो सबै तपाइँको स्वादमा निर्भर गर्दछ।
अब यदि तपाइँ तपाइँ चाहानुहुने सबै संस्करणहरु किन्न सक्नुहुन्न र बरु तपाइँ मात्र एक मा निर्णय गर्न को लागी, चिन्ता नगर्नुहोस्, सबै संस्करणहरु महान मनोरन्जन र ग्यारेन्टी छ कि तपाइँ रमाउनुहुनेछ दुबै व्यक्तिगत खेल र समूहमा.
के तपाइँ Bayonetta3प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? यहाँ तपाइँको विकल्प
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने bayonetta3प्राप्त गर्नुहोस्, तपाइँ केवल तपाइँको भ्रमण गर्न आवश्यक छ मनपर्ने पसल, त्यो जहाँ तपाइँ सधैं जानुहुन्छ। रिलीज मिति आइसके पछि, तपाइँ यसलाई एक सस्तो मूल्य मा सबै उपलब्ध कन्सोल मा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
यो केहि भन्दा सामान्य सामान्य हो कन्सोलहरूको लागि खेलहरू जस्तै प्लेस्टेशन, वा Xbox; कन्सोल जसको साथ उनीहरुका खेलाडीहरु धेरै शान्त महसुस गर्छन् र भएकोमा आनन्द लिन्छन् खेलको मूल संस्करण.
अर्को विकल्प, यदि तपाइँ आफ्नो घर छोड्न चाहनुहुन्न, अनलाइन शपिंग हो। तपाइँ तिनीहरूलाई मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन भिडियो खेल स्टोरहरू, वा भित्र पनि अनलाइन प्लेटफार्महरू, एक सरल र ग्यारेन्टी तरीकामा।
Si यी अनलाइन स्टोरहरूमा किनमेल गर्नुहोस्, तपाइँ समय र मेहनत बचाउनुहुन्छ र तपाइँको अर्डर तपाइँको घर को ढोकामा आउनेछ, वा तपाइँ एक भर्चुअल संस्करण को लागी अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको कन्सोल मा स्थापना गर्नुहोस्।
तर प्लेटफर्महरु जस्तै Stadia वा स्टीम, तपाइँ एक भुक्तानी वितरण पछि रमाईलो गर्न को लागी अनुमति दिनुहुन्छ, उनीहरुको सर्भर को उपयोग गरी, जसको मतलब यो हो कि तपाइँ खेल्न सक्नुहुन्छ जब सम्म तपाइँ इन्टरनेट संग जोडिएको छ र सदस्यता अन्तर्गत।
यस सेवालाई काममा लिनुको अर्थ छोटो अवधिमा क सानो आउटलेट एक मूल खेल किन्नु भन्दा, प्लस यो तपाइँ एक सीमित समय को लागी धेरै फरक खेल खेल्न को लागी अनुमति दिन्छ।
Bayonetta3खेल्न जान्नुहोस्
यो भनाइ बाहेक अरु केहि पनी छैन अभ्यास एक मास्टर बनाउँछ, र सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी केहि मा सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी यो अभ्यास मा राख्नु हो। जति धेरै तपाइँ एक काम गर्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै विशेषज्ञ बन्नुहुन्छ।
एउटै खेल संग हुन्छ। अधिक अनुभवी तपाइँ, अधिक उत्तरदायी तपाइँ र तपाइँको मस्तिष्क हुनेछ अधिक जटिल रणनीतिहरु निर्माण गर्ने क्षमता हुनेछ। त्यसोभए यदि तपाईले खोज्नु भएको कुरा हो Bayonetta3खेल्न सिक्नुहोस् पहिलो कुरा तपाइँलाई गर्न को लागी शान्त र बारम्बार अभ्यास हो।
सबै भन्दा राम्रो हुनको लागि तपाइँ पनि हुनुपर्दछ आफ्ना शत्रुलाई भेट्नुहोस्। तिनीहरूको आन्दोलनको तरीका, उनीहरुको रणनीति र प्रविधि। उनीहरुलाई बुझ्न को लागी तपाइँ उनीहरुलाई धेरै सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ती चीजहरु छन् कि तपाइँ उनीहरुलाई हराउन को लागी उपयोगी हुनेछ। तपाइँ यसको शक्ति र कमजोरी के हो पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ। साथै, तपाइँलाई चाहिन्छ तपाईका विपक्षीहरुको व्यवहार जान्नुहोस्। चाहे उनीहरु NPCs वा वास्तविक खेलाडीहरु हुन्, उनीहरु सबै सीप र रणनीतिहरु लागू गर्दछन्, कि यदि तपाइँ उनीहरुलाई थाहा छ, तपाइँ सजीलै कसरी उनीहरुलाई हटाउन को लागी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा राम्रो हुन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ उनीहरुलाई ठीक संग विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरुको कमजोरीहरु पाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी उनीहरुका गल्तीहरु को लाभ उठाउन को लागी। तपाइँको प्रतिद्वन्द्वीलाई थाहा छ तपाइँ उसलाई एक फायदा दिन्छ।
तर पर्खनुहोस्, प्रश्न विपक्षी संग समाप्त हुँदैन। तपाइँ एक स्तरमा पुग्न जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँ यति बलियो हुन जाँदै हुनुहुन्छ, कि तपाइँ आफैंलाई तपाइँको आफ्नै दुश्मन बनाउनुहुनेछ, एक राम्रो तरीकाले। आफ्नै कार्यनीति मनन गर्नुहोस् र हरेक दिन राम्रो हुन काम गर्दछ। तपाईं जहिले पनि राम्रो हुन सक्नुहुन्छ।
जुन मा क्षण मा तपाईं अन्य प्रतिस्पर्धी अध्ययन तपाइँ आफ्नो शक्ति र कमजोरी पाउन सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो कुरा के तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा ले तपाइँलाई मद्दत गर्दछ, यो जरूरी छैन कि उनिहरुको रणनीतिहरु बिल्कुल उस्तै गर्न को लागी हो, तर उनीहरु बाट सिक्ने र उनीहरुलाई तपाइँको आफ्नै शैली जोड्ने बारे मा।
अन्तमा, रणनीतिहरु स्थापित, शान्त संग खेल्नुहोस्, र सधैं पारदर्शी खेल्नुहोस्। यी सबै भन्दा राम्रो Bayonetta3खेलाडी बन्न मुख्य परिसर हो तारा बन्नुहोस्.
सबै जानकारी तपाइँ Elden रिंग खेल्न को लागी जान्न को लागी आवश्यक छ
Elden रिंग एक खेल हो कि थप अनुयायीहरू थप गर्दैछ। यसको विकास र खेलाडी को मनमोहक तरीका यसको अनुयायीहरु लाई अधिक वफादार हुन को लागी अन्त्य गर्न को लागी कारण बनाउँछ र जो अझै सम्म यो रमाईलो छैन यो खेल्न चाहन्छन्।
जो Elden रिंग संग प्रयोग गर्न को लागी शुरू गरीरहेका छन् को लागी, हामी यो व्यापक गाइड कि केहि धेरै उपयोगी सुझावहरु को पेशकश गर्दछ। यो जानकारी संग तपाइँ तपाइँ के गर्न को लागी एक पुरा तरिकाले disoriented बिना खेल शुरू गर्न को लागी एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
खेल रिलिज मिति
को अनुयायीहरू Elden रिंग तिनीहरू पहिले नै खेलको प्रीमियरको लागि तयारी गरिरहेको हुनुपर्छ धेरै चाँडै नै हुनेवाला छ रिलीज मिति, जो तिनीहरूले खेल्न सक्छन् कन्सोल-उपलब्ध। उत्कृष्ट भिडियो खेल संभावनाहरु संग, भिडियो खेल को आगमन सबै नयाँ चीजहरु कि यो यसको साथ ल्याउन को लागी रमाईलो गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी आतुर छ।
Elden रिing बाहिर खडा को लागी सुझावहरु
यो पनि छुन्छ, सम्झन सुरू गर्नुहोस् सुझावहरु, मद्दत गर्न को लागी Elden रिंग तपाइँको हात मा छ, तपाईं राम्रो प्रदर्शनको साथ खेलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग तपाईंको लागि केही छ।
अनुभव पाउनुहोस् र स्तर माथि: प्रगति र विकसित तपाइँ अधिक अवसर दिनेछ र तपाइँ खेलाडीहरु को बाकी मा एक फायदा हुनेछ। यस तरीकाले तपाइँ माथि जानुहुन्छ र तपाइँको कौशल को अतिरिक्त, तपाइँको चरित्र को अवसरहरु लाई सुधार गर्दछ।
Elden रिंग छ के पत्ता लगाउनुहोस्: त्यहाँ सूचना भन्दा राम्रो हतियार हुनेछ। दिमागमा राख्दै उपकरणहरु छन् कि भिडियो खेल बाधाहरु लाई पार गर्न को लागी तपाइँको निपटान मा राख्छ छिटो समस्याहरु लाई हल गर्न को लागी आवश्यक छ
खेल्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू अनुभव गर्नुहोस्: कहिलेकाँही खेल्ने तरिका यो हाम्रो लागि काम गर्दछ, तर नयाँ विकल्प को कोशिश गरेर तपाइँ सुधार गर्न को लागी तरीकाहरु खोज्न को लागी एक राम्रो मौका छ र अधिक सीप संग लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी।
तपाईंलाई आवश्यक सेटिंग्स बनाउनुहोस्: तपाइँ खेल सेटिंग्स मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ खेल संगै सजीलो संग प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। केहि समायोजन जुन तपाइँ बनाउन सक्नुहुन्छ स्क्रिन, ध्वनि, नियन्त्रण, वा केहि जुन तपाइँलाई अझ राम्रो खेल्न अनुमति दिन्छ संग गर्न को लागी हुन सक्छ।
कुन मोडलमा तपाइँ Elden रिंग अनलाइन खेल्न सक्नुहुन्छ?
सौभाग्य देखि, तपाइँ बिभिन्न कन्सोल र तपाइँको कम्प्युटर मा खेल खेल्न सक्षम हुनुहुनेछ, त्यसैले त्यहाँ संस्करण छ कि जारी गरिनेछ कोशिश गर्न रोक्न कुनै बहाना छैन। कन्सोल मा यो रमाईलो गर्न को लागी पाईन्छ कि विकल्प को केहि छन् प्लेस्टेशन y Xbox, जसको संभावना बाकीका खेलाडीहरूसँग अनलाइन खेल्नुहोस् वा यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने घरमा खेल खेल्नुहोस्।
को मुख्य अभिप्राय बिभिन्न संस्करणहरूमा सुरूवात गर्नुहोस् यो हो कि भिडियो खेल सबैभन्दा ठूलो सम्भावित दर्शकहरु सम्म पुग्न को लागी प्रबन्ध गर्दछ र अन्य खेलाडीहरु संग साझा गर्न को लागी सजिलो र मनोरन्जन छ। तपाइँको स्वाद अनुसार, तपाइँ Elden रिंग द्वारा प्रस्ताव गरीएको विकल्पहरु मध्ये कुनै पनि छनौट गर्ने संभावना छ।
त्यस्तै गरी, सबै संस्करणहरु धेरै हास्यास्पद छन् र को संभावना प्रदान गर्दछ व्यक्तिगत र समूहहरूमा उत्कृष्ट अनुभवको आनन्द लिनुहोस्.
यी मार्गहरु को लागी धन्यवाद तपाइँ Elden रिंग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
पहिलो कुरा तपाईले गर्नु पर्छ एल्डेन रिंग किन्नुहोस् स्टोरमा जानुहोस् जुन तपाइँको अपार्टमेन्ट को नजिक छ, वा एक तपाइँ सधैं जानुहुन्छ। तपाइँको खेल को रिलीज मिति पछि, र निम्न दिनहरुमा, तपाइँ यसलाई यसको सबै प्लेटफार्महरुमा उपलब्ध देख्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ।
सबैको लागि वास्तविक गेमरहरू, यो हुनु राम्रो हुन्छ भिडियो खेलहरूको मूल संस्करण। यस तरीकाले, उनीहरु धेरै भिडियो गेम को निर्माण को साथ सहयोग र ठूलो फ्रेंचाइजी लाई समर्थन गर्दछ।
तर तपाइँ यसलाई भौतिक प्रतिष्ठानहरुमा मात्र पत्ता लगाउनुहुनेछ, तर तपाइँ यसलाई मा किन्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ अनलाइन भिडियो खेल स्टोरहरू वा भित्र अनलाइन प्लेटफार्महरू जसमा केवल एक खाता भएकोसँग, तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
Si तपाईं यी अनलाइन स्टोरहरूमा खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ समय र मेहनत बचाउनुहुन्छ र तपाइँको अर्डर तपाइँको घर को ढोकामा आउनेछ, वा तपाइँ एक भर्चुअल संस्करण पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको कन्सोलमा स्थापना गर्नुहोस्।
भिडियो गेम स्टोरहरु को अतिरिक्त, त्यहाँ एक सदस्यता प्याकेज भर्ना गरेर खेल्न को लागी विकल्प छ। यस अवस्थामा, तपाइँ एक खेल आफैं किन्नुहुन्न, तर समय को एक निश्चित अवधि को लागी शीर्षक को एक विशाल विविधता को उपयोग गर्ने अधिकार। यो Stadia वा भाप को मामला हो।
यी प्लेटफर्महरूको बारेमा उत्तम कुरा भनेको उनीहरूको मूल्य हो। सदस्यता भुक्तान गर्नुहोस् धेरै कम खर्चिलो एक भिडियो खेल किन्नु भन्दा, प्लस यो सजीलो शीर्षक को एक विस्तृत श्रृंखला मा प्राप्त गर्न को लागी बनाउँछ।
कसरी एल्डन रिंग मा ठूलो हुन?
हामी सबै novices को रूप मा शुरू हुन्छ हरेक पल्ट हामी केहि फरक अनुभव गर्छौं, कुनै फरक पर्दैन के अघिल्लो अनुभव हामी अन्य क्षेत्रहरुमा छ, केहि केहि शुरू बाट सधैं एक नयाँ अनुभव हो, तर आराम संग, प्रयास संगै तपाइँ एक विशेषज्ञ बन्नुहुनेछ।
जस्तो कि हामीले पहिले नै तपाइँलाई भन्यौं, तपाइँ सबै कुरा मा अभ्यास गर्नु पर्छ कि तपाइँ एक राम्रो तरीका मा बाहिर ले जाने को आशा छ। यो समय, भिडियो गेम। अधिक तपाइँ अभ्यास, अधिक तपाइँ सक्नुहुन्छ Elden रिंग को रहस्य जान्नुहोस्। त्यो मामला भइरहेको छ, यदि तपाईले खोज्नु भएको कुरा हो भने सर्वश्रेष्ठ Elden रिंग खेलाडी हुन, तब हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि अभ्यास सुरु गर्नुहोस्, तपाई यसलाई निरन्तर प्राप्त गर्नुहुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो हुनको लागि तपाइँसँग पनि हुनुपर्दछ तपाईका विरोधीहरुलाई भेट्नुहोस्। तिनीहरूको आन्दोलनको शैली, उनीहरुको रणनीति र सीप। यसको लागी तपाइँ उनीहरुलाई धेरै सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्नु पर्छ। तिनीहरू साना विवरणहरु छन् कि उनीहरुलाई हराउन को लागी धेरै उपयोगी हुनेछ। तपाइँ यसको फाइदा र कमजोरी के हो पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँलाई के फाइदा छ र नराम्रो प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ यसलाई प्रभावी ढंगले गर्नुहुन्छ, तपाइँ सजीलै तिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। चाहे उनीहरु NPCs वा वास्तविक खेलाडीहरु हुन्, उनीहरु सबै सीप र रणनीतिहरु को उपयोग गर्दछन्, यदि तपाइँ उनीहरुलाई थाहा छ, तपाइँ उनीहरुलाई सजीलै हराउन को लागी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँ बाहिर उभिन सक्नुहुन्छ।
एकपटक तपाइँ थाहा पाउनुभएको छ कि उसको डाउनसाइड्स के हो, उसलाई हिर्काउनुहोस् जहाँ यो सबैभन्दा धेरै दुख्छ र उसलाई पराजित गर्नुहोस्। एक कदम अगाडी हुनु सधैं एक ठूलो लाभ हो।
तर पर्खनुहोस्, मामला विपक्षी संग समाप्त हुँदैन। तपाइँ एक बिन्दुमा पुग्न जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँ यति बलियो हुन जाँदै हुनुहुन्छ, कि तपाइँ तपाइँको आफ्नै प्रतिद्वंद्वी बन्नुहुनेछ, एक राम्रो तरीका मा। आफ्नै युक्तिहरू अध्ययन गर्नुहोस् र अभ्यास हरेक दिन राम्रो हुन। तपाई जहिले पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको अतिरिक्त तपाइँका प्रतिद्वन्द्वीहरूका कमजोरीहरू फेला पार्नुहोस्, तपाइँ पनि उनीहरुको शक्ति के हो पत्ता लगाउनुहुनेछ। सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी तपाइँको बाटो मा तपाइँ प्रत्येक अवसर को लागी के पिउन को लागी पहिचान गर्न को लागी छ। त्यो मामला जाँदैछ, यो नराम्रो देख्न को लागी कुन पक्षहरु अन्य खेलाडीहरु को लागी काम गर्दछन् र उनीहरुलाई तपाइँको खेल को शैली मा अनुकूलन गर्न को लागी हुनेछैन।
समाप्त गर्न को लागी, शान्त रहनुहोस्, बेतहाशा कारबाही मा उफ्रनुहुन्न र एक राम्रो रणनीति को लागी यो तपाइँलाई सही तरीका मा प्रतिक्रिया गर्न को लागी सजिलो बनाउन को लागी उत्तम परिणाम सम्म पुग्न को लागी प्रस्ताव गर्नुहुन्न। यदि तपाइँ यी निर्देशनहरु लाई पालन गर्न को लागी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, तपाइँ हुन सक्नुहुन्छ एल्डन रिंगमा सबैभन्दा उत्तम.
राम्रो र दुष्ट2खेल गाइड परे
ती मध्ये एक खेल बढी प्रशंसकहरू प्राप्त गर्दैछ र अधिक गति लिईरहेछ राम्रो र दुष्ट २. यो खेल तपाइँ एक रमाईलो र मनमोहक तरीकाले अपराजेय खेलहरु को लागी, तपाइँ नयाँ हुनुहुन्छ वा पहिले नै खेल पहिले नै खेल्नुभएको छ।
अब, जानकारी छ कि हामी यो गाइड मा प्रस्तुत धेरै उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाइँ राम्रो र दुष्ट २ परे खेल्न को लागी शुरू गरीरहनुभएको छ र केहि लाभ चाहानुहुन्छ। सल्लाहको साथमा कि हामी तपाइँलाई तल दिनेछौं, तपाइँ एक विशेषज्ञ बन्न सक्नुहुन्न, तर जे होस्, तपाइँसँग आधारभूत जानकारी हुनेछ जुन तपाइँलाई मद्दत गर्दछ।
कहिले राम्रो र दुष्ट २ को प्रीमियर हुन्छ?
यो प्रकाशित भैसकेको छ राम्रो र ईभिल पछाडि2हुन रिलीज मिति, यस पल बाट, उहाँका अनुयायीहरु लाई मद्दत गर्न सकेन तर यो संस्करण मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि के नयाँ सम्भावनाहरु लाई प्रस्तुत गर्न को लागी उत्सुक हुन सक्छ। कन्सोल-उपलब्ध.
राम्रो र दुष्ट २ परे बाहिर बाहिर खडा गर्न को लागी चाल
त्यसो भए, राम्रो लाग्दछ कि यो उल्लेख गर्न सुरु गर्नुहोस् सुझावहरु तपाइँलाई मद्दत गर्न, त्यसैले जब राम्रो र दुष्ट2परे तपाइँको हातमा छ, धेरै राम्रो परिणामको साथ खेलहरूको मजा लिनुहोस्। हामीसँग तपाईंको लागि केही छ।
अभ्यास जारी राख्नुहोस् र तपाईंको स्तर बढाउनुहोस्: तपाइँको रणनीतिहरु लाई सही र उच्च स्तर सम्म पुग्न बिस्तारै तपाइँ एक राम्रो खेलाडी बनाउनुहुनेछ। यसबाहेक, खेल मा माथि सार्ने उपकरण हो कि तपाइँ तपाइँको लक्ष्य प्राप्त गर्न मा मद्दत गर्दछ खोलिन्छ।
पत्ता लगाउनुहोस् के राम्रो र दुष्ट २ भन्दा पर प्रस्ताव गर्दछ: त्यहाँ सूचना भन्दा उपयोगी कुनै हतियार छैन। दिमागमा राख्दै कि उपकरण के हो कि भिडियो गेम तपाइँको निपटान मा बाधाहरु लाई पार गर्न को लागी इष्टतम छ छिटो समस्याहरु लाई प्रतिक्रिया दिन को लागी
तपाईंको रणनीति बिभिन्न तरिकाहरूमा लागू गर्नुहोस्: अधिक रणनीतिहरू तपाईले जति धेरै प्रयोग गर्नुभयो तपाईले चाल पाउनुहुन्छ वा चालहरू बनाउँदछ जुन तपाईंलाई उत्तम खेलाडी बनाउँदछ।
नियन्त्रणहरू र सेटिंग्समा अनुकूलन गर्नुहोस्: रिजोलुसन, नियन्त्रण र सबै सेटिंग्स कि यो तपाइँको लागी खेल्न सजिलो बनाउन को लागी अनुमति दिनुहोस्। नियन्त्रण को व्यवस्था तपाइँ तपाइँको आराम को स्तर मा खेल डक गर्न को लागी खेल को समयमा अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त गर्न को लागी संभावना दिन्छ।
रूपरेखाहरु जसमा तपाइँ राम्रो र दुष्ट2परे कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ
राम्रो र दुष्ट २ परे2को नयाँ संस्करण सबै स्वाद कभर गर्दछ, यदि तपाइँ कन्सोल को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ वा पीसी मनपर्छ, तपाइँ बिभिन्न रूप मा भिडियो गेम को कोशिश गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। कन्सोलको लागि, तपाई यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्लेस्टेशन, Xbox , अरू मध्ये, तपाईंलाई घरमा प्रयास गर्ने अवसर दिने वा अन्य खेलाडीहरूसँग अनलाइन जडान गर्नुहोस्.
तर तपाईं पनि सक्नुहुन्छ क्लाउडमा खेल्नुहोस् कम्प्यूटर को लागी स्टीम र Stadia जस्तै प्लेटफार्महरु को माध्यम बाट। यी संग तपाइँ बजार मा नवीनतम कन्सोल वा उन्नत सुविधाहरु संग एक पीसी बिना गर्न सक्नुहुन्छ रमाईलो खेल खेल्नुहोस्.
को उद्देश्य विभिन्न संस्करणहरूमा जारी गर्नुहोस् यो हो कि खेल सबैभन्दा ठूलो सम्भावित दर्शकहरु सम्म पुग्छ र अन्य खेलाडीहरु संग खेल्न को लागी सुलभ र रमाईलो छ। तपाइँको स्वाद मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ संभावना राम्रो र दुष्ट २ द्वारा परे प्रस्ताव गरीएको विकल्प मध्ये कुनै पनि छनौट गर्ने संभावना छ।
अब यदि यो तपाइँको पहुँच को भित्र धेरै संस्करणहरु प्राप्त गर्न को लागी तपाइँ चाहानुहुन्छ र तपाइँ मात्र एक मा निर्णय गर्न को लागी, नराम्रो लाग्दैन, संस्करणहरु मध्ये प्रत्येक महान रमाईलो छ र तपाइँ बाँच्नुहुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी छ। अपराजेय मिल्छ दुबै व्यक्तिगत र अन्य खेलाडीहरूसँग.
राम्रो र दुष्ट २ भन्दा परे किन्न को लागी?
तपाईले गर्न सक्ने पहिलो कुरा राम्रो र दुष्ट2परे ल्याउनुहोस् पसल कि तपाइँको घर को नजिकै छ, वा एक तपाइँ सधैं जानुहुन्छ जानुहोस्। तपाइँको खेल को रिलीज मिति पछि, र आउने दिनहरुमा, तपाइँ यसलाई यसको सबै प्लेटफार्महरुमा उपयुक्त देख्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यो दिन सामान्य छ कि कन्सोल को प्रशंसक जस्तै PlayStation, वा Xbox ज्यादातर भएकोमा आनन्द लिन्छन् सबै रिलीज को मूल संस्करणहरु.
र यदि तपाइँ वरपर एक भिडियो गेम स्टोर छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाइँ पनि मा तपाइँको मनपर्ने भिडियो खेलहरु किन्न सक्नुहुन्छ अनलाइन भिडियो खेल स्टोरहरू, वा भित्र अनलाइन प्लेटफार्महरू, यदि तपाइँसँग खरीद गर्न खाता छ।
अनलाइन स्टोरहरूमा खरीद गर्नुहोस् यो घर बाट किन्ने, सुरक्षित र आराम संग पर्यायवाची छ। थप रूपमा, यो विकल्प तपाइँको शीर्षक तपाइँको घर को ढोकामा पुग्न को लागी अनुमति दिन्छ वा, यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ, तपाइँ भर्चुअल संस्करण छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाइँ तपाइँको कन्सोल मा सीधा स्थापना गर्नुहोस्।
त्यहाँ पनि सदस्यता भिडियो खेल प्लेटफार्म सेवाहरु छन्। यी प्लेटफर्महरु मा तपाइँ प्लेटफर्म को सर्वर को उपयोग गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ, एक सेवा को उपयोग कि क्लाउड मा रहन्छ। यसको लागी तपाइँ मात्र एक इन्टरनेट जडान छ र सदस्यता तिर्नुहोस्।
यस सेवालाई काममा लिनुको अर्थ छोटो अवधिमा क लोअर आउटलेट एक मूल भिडियो खेल किन्नु भन्दा, प्लस यो समय को एक विशिष्ट अवधि को लागी धेरै फरक खेल खेल्न मद्दत गर्दछ।
केहि सुझावहरु राम्रो र दुष्ट2परे मा सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी
भनाइ बाहेक अरु केही सत्य छैन अभ्यास एक मास्टर बनाउँछ, र सबै भन्दा राम्रो तरीका केहि सुधार गर्न को लागी यो अभ्यास मा राख्नु हो। अधिक तपाइँ एक कार्य गर्नुहुन्छ, अधिक कौशल तपाइँ प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो एउटै अवधारणा पनि भिडियो गेम को लागी गणना गर्दछ। यदि तपाइँ एक शिक्षक हुन चाहानुहुन्छ, तपाइँ अभ्यास गर्न आवश्यक छ। यस संग, तपाइँको मस्तिष्क आदेश र कृत्रिम बुद्धिमत्ता राम्रो र दुष्ट2को परे समायोजित हुनेछ, राम्रो योजना र रणनीतिहरू सिर्जना गर्दै। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने राम्रो र दुष्ट २ परे एक शिक्षक बन्नुहोस्अभ्यास सुरु गर्नुहोस्।
केहि अरू चीज जुन तपाईलाई मद्दत गर्न सक्दछ तपाईका दुश्मनहरूको व्यवहारको अध्ययन गर्नुहोस्। दुश्मन को आन्दोलन अनुमान र आफ्नो रणनीति को विश्लेषण गर्न को लागी तपाइँ आफ्नो कमजोरीहरु को खोज को लागी नजिक ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ यसको फाइदा र कमजोरी के हो पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँलाई पनि चाहिन्छ तपाइँको दुश्मन को कार्य गर्न को लागी थाहा छ। चाहे उनीहरु NPCs वा वास्तविक खेलाडीहरु हुन्, उनीहरु सबै सीप र रणनीतिहरु को उपयोग गर्दछन्, यदि तपाइँ उनीहरुलाई जान्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरुलाई सजीलै कसरी हटाउने र सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
जब तपाइँ पत्ता लगाउनुहुन्छ कि उसको कमजोरीहरु के हो, उसलाई आक्रमण गर्नुहोस् जहाँ यो सबैभन्दा धेरै दुख्छ र उसलाई मार्नुहोस्। एक कदम अगाडी रहनु सधैं राम्रो अवसरहरु को मतलब हो।
त्यस्तै गरी, तपाइँका कमीकमजोरीहरू के हुन् पत्ता लगाउनुहोस् यसले तपाइँलाई उनीहरुलाई सुदृढ बनाउन र तपाइँलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ, त्यसैले तपाइँको रणनीति को समीक्षा गर्नुहोस् र उनीहरु लाई हरेक पल्ट मौका दिनुहोस्। यो फरक पर्दैन यदि उनीहरूले तपाइँलाई पहिले मद्दत गरेका छन्, पक्कै तपाइँ अझ बढ्न सक्नुहुन्छ।
डेल तपाईका विपक्षीहरूको विश्लेषण तपाइँ दुई प्रकारका चीजहरु पाउनुहुनेछ: ती जुन उनीहरु राम्रो गर्छन् र ती जुन उनीहरु यति राम्रो छैनन्। नराम्रो मध्ये हामी पहिले नै टिप्पणी गर्यौं; उनीहरुको फाइदा लिनुहोस्। यो राम्रो छ कि ती बाट सिक्न राम्रो छ। यो केवल यो प्रतिलिपि छैन, यो तपाइँको रणनीतिहरु र खेल को तपाइँको तरीका मा समायोजित गर्न को लागी राम्रो छ, ठाउँ मा जारी राख्न को लागी जहाँ तपाइँ राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ।
अन्तमा, हतारमा कार्य नगर्नुहोस्, तपाइँको रणनीतिहरु लाई राम्रो संग योजना बनाउनुहोस् र छोटो अवधिको लक्ष्य सेट गर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाइँ बिस्तारै तपाइँको लक्ष्य सम्म पुग्नुहुनेछ। यदि तपाइँ यी सुझावहरुको पालना गर्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन तपाइँ हुन को लागी नजिक हुनेछ राम्रो र ईभेल २ भन्दा परको सर्वश्रेष्ठ.
मृत टापु २ भिडियो गेम गाइड
मृत टापु2भिडियो गेमहरू मध्ये एक हो अधिक प्रशंसकहरू प्राप्त गर्दैछ। यसको रमाईलो तरीका खुलाउने र खेलाडी लाई जोड्ने को कारणले यो खेल्न को लागी अधिक वफादार बन्नुहोस् र जो अझै सम्म खेलेका छैनन् यो प्रयास गर्न चाहन्छन्।
ती जो मृत टापु2को लागी नयाँ छन् को लागी, हामी यो पूरा गाइड हो कि धेरै उपयोगी सुझावहरु को पेशकश गर्दछ। यो जानकारी संग तपाइँ तपाइँ के गर्न को लागी एक पूर्ण धारणा बिना खेल शुरू गर्न को लागी एक व्यापक धारणा प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यो पहिले नै सार्वजनिक छ कि प्रक्षेपण को पल मृत आइल्याण्ड2हुन रिलीज मितिजब देखि यो जानकारी दिईएको थियो, उहाँका अनुयायीहरु लाई नयाँ संस्करणहरु लाई यो संस्करण ल्याईनेछ कि मा रमाईलो गर्न सकिन्छ जान्न को लागी उत्साहित हुन बाट बच्न सकेन। कन्सोल-उपलब्ध.
टिप्स मृत टापु २ मा बाहिर उभिन को लागी
यो तपाईंलाई उल्लेख गर्न उत्तम समय हो चालहरु ताकि तपाइँ सकारात्मक परिणाम संग मृत टापु २ मा खेल बनाउन सक्नुहुन्छजब खेल जारी हुन्छ तपाईं एक कदम अगाडि पाउनुहुनेछ। यी तल सूचीबद्ध छन्।
तपाइँको अनुभव र स्तर माथि वृद्धि गर्नुहोस्: सुधार र विकसित तपाईं को लागी ढोका खुल्नेछ र तपाइँ खेलाडीहरु को बाकी मा एक लाभ प्राप्त हुनेछ। यो कसरी तपाइँ माथि जानुहुन्छ र तपाइँको कौशल को अतिरिक्त, तपाइँको चरित्र को संभावनाहरु लाई सुधार गर्दछ।
उपकरणहरु तपाइँ मृत टापु २ मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बारे जान्नुहोस्: केहि छ कि तपाइँ एक कदम अगाडी राख्नुहुनेछ उपकरणहरु कि भिडियो गेम तपाइँलाई दिनुहुन्छ थाहा छ। थाहा पाएर कसरी र कहिले मृत द्वीप २ तपाइँलाई उपलब्ध गराउँछ प्रयोग गर्न को लागी, तपाइँ यो लक्ष्य सम्म पुग्न को लागी एक समयमै ढंगले प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
खेल्नको लागि धेरै तरिकाहरू प्रयास गर्नुहोस्: कहिलेकाँही खेल्ने तरिका यसले हाम्रोलागि काम गर्दछ, तर नयाँ विकल्पहरू प्रयोग गरेर तपाईंसँग सुधार गर्नका लागि तर अझ बढी सजीलो लक्ष्य हासिल गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउने राम्रो मौका हुन्छ।
तपाईंको मनपर्ने सेटिंग्स अनुकूल गर्नुहोस्: खेलहरु छन् जसमा सेटिंग्स तपाइँ सान्त्वना दिनुहुन्छ तपाइँ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्ने संभावना दिन्छ। स्क्रिन र अडियो सेटिंग्स परिमार्जन र तपाइँको प्राथमिकताहरु अनुसार नियन्त्रण को आदेश धेरै उपयोगी छ।
रूपरेखा जहाँ तपाइँ डेड आइल्याण्ड २ खेल्न सक्नुहुन्छ
त्यहाँ भाग लिने कोही छैन, मृत टापु २ कन्सोल वा पीसी रुचाउने दुबै को लागी उपलब्ध हुनेछ, दुबै तरीका उपलब्ध उपलब्ध गराउँदै। कन्सोल को बीचमा कि भिडियो गेम को आनन्द लिने संभावना दिनेछन् प्लेस्टेशन y Xbox, जहाँ खेलाडीहरूले गर्न सक्छन् स्थानीय रूपमा खेल्नुहोस् वा अन्य खेलाडीहरूसँग अनलाइन जडान गरेर.
तर यो पनि उपलब्ध हुनेछ क्लाउडमा खेल्नुहोस् पीसीमा स्टीम र स्टडिया जस्तै पृष्ठहरू मार्फत। तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर, यो बजारमा विशेष कन्सोल वा विशेष सुविधाहरू सहितको कम्प्युटरमा हुनु आवश्यक हुनेछैन धेरै मनोरन्जनात्मक खेलहरूको आनन्द लिनुहोस्
त्यस्तै, त्यहाँ अवसर हुनेछ क्लाउडमा खेल्नुहोस्, तब तपाइँ मृत टापु २ को परीक्षण गर्न को लागी एक उन्नत टीम को आवश्यकता छैन। स्टीम र Stadia जस्तै प्लेटफार्महरु को लागी सर्भर मा, तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ रमाईलो खेल खेल्नुहोस् तुरुन्तै।
अवश्य पनि, लक्ष्य भनेको बृहत सम्भावित दर्शकहरूलाई खुशी पार्नु हो। यसका लागि तपाइँ मृत टापु २ को बिभिन्न संस्करणहरु पाउनुहुनेछ कि धेरै आवश्यकताहरु को लागी प्रतिक्रिया, सबै कुरा प्राथमिकताहरु मा निर्भर गर्दछ कि प्रत्येक व्यक्ति जब सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प को छनौट मा निर्भर गर्दछ।
संस्करणहरु को प्रत्येक महान रमाईलो प्रदान गर्दछ, त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाइँ ती मध्ये एक मा निर्णय गर्न को लागी। एक अद्भुत अनुभव छ जसमा तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा र अन्य मानिसहरु संग प्रयोग गर्ने संभावना हुनेछ यो सुरक्षित छ।
यी माध्यम बाट तपाइँ मृत टापु २ किन्न सक्नुहुन्छ
Para मृत टापु २ पाउनुहोस् तपाईंले भर्खर जानुहोस् प्ले स्टोर त्यो नजिक छ वा एक जसको साथ तपाइँ विश्वास मा अधिक हुनुहुन्छ मा जानुहोस्। प्रक्षेपण पछि तपाइँ एक सुलभ मूल्य मा यसको सबै रूपरेखाहरु पाउनुहुनेछ।
यो सबै भन्दा सामान्य हो कन्सोलहरूको लागि खेलहरू जस्तै प्लेस्टेशन, वा Xbox; कन्सोल कि यसको प्रयोगकर्ताहरु संग धेरै सहज छन् र स्वामित्व को लागी माया गर्छन् खेलको मूल संस्करण.
तर भौतिक प्रतिष्ठान एक मात्र विकल्प होइन। यदि तपाइँ नजिकै कुनै प्रतिष्ठान छैन, वा तपाइँ मात्र तपाइँको अपार्टमेन्ट छोड्न चाहनुहुन्न, तपाइँ उनीहरुलाई किन्न सक्नुहुन्छ अनलाइन स्टोरहरूवा अनलाइन प्लेटफार्महरू.
यी स्टोरहरूको कडा पोइन्ट त्यो हो तपाइँ तपाइँको खरीद गर्न को लागी तपाइँको घर छोड्नु हुँदैन। खेल सही तपाइँको ढोकामा आउँछ, वा तपाइँ भुक्तानी वितरण पछि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै स्थापना गर्नुहोस्।
तर प्लेटफर्महरु जस्तै Stadia वा स्टीम, तपाइँ एक भुक्तानी गरे पछि रमाईलो गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस्, उनीहरुको सर्वर को उपयोग गरी, जसको मतलब यो हो कि तपाइँ खेल्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ इन्टरनेट र सदस्यता अन्तर्गत जडित हुनुहुन्छ।
यो सेवाको अर्थ छोटो अवधिमा क कम भुक्तान एक मूल भिडियो खेल प्राप्त गर्नु भन्दा, प्लस यो एक निश्चित समय को लागी धेरै शीर्षकहरु को उपयोग गर्न मा मद्दत गर्दछ।
कसरी मृत टापु २ मा राम्रो हुन?
हामी सबै नौसिखिया हुन को लागी शुरू गर्छौं जब हामी केहि नयाँ अनुभव गर्छौं, अघिल्लो ज्ञान को बाहेक हामी अन्य क्षेत्रहरुमा छ, स्क्र्याच बाट केहि प्रयास सधैं एक फरक भावना उत्पन्न गर्दछ, तर शान्त, काम संगै तपाइँ एक विशेषज्ञ बन्नुहुन्छ।
एउटै भिडियो गेम को लागी जान्छ। अधिक अनुभव तपाईं, राम्रो प्रतिक्रिया को लागी तपाइँ र तपाइँको मस्तिष्क हुनेछ राम्रो रणनीति निर्माण गर्ने क्षमता छ। त्यसोभए के तपाइँ चाहानुहुन्छ भने मृत टापु2खेल्न सिक्नुहोस् तपाईले के गर्नुपर्दछ धैर्य गर्नुहोस् र बारम्बार अभ्यास गर्नुहोस्।
अर्को कुरा जुन तपाईंको कार्यलाई सजिलो बनाउन सक्छ तपाइँको दुश्मन को रणनीतिहरु को विश्लेषण। दुश्मन आन्दोलनहरु को भविष्यवाणी र आफ्नो रणनीति बुझ्न को लागी तपाइँ आफ्नो कमजोर स्थानहरु लाई उजागर गर्न को लागी नजिक राख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ यो सही र गलत के पाउन को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँलाई पनि चाहिन्छ तपाइँका विरोधीहरूबाट कसरी खेल्ने भनेर सिक्नुहोस्। चाहे उनीहरु NPCs वा वास्तविक खेलाडीहरु हुन्, उनीहरु सबै सीप र रणनीति को उपयोग गर्दछन्, यदि तपाइँ उनीहरुलाई थाहा छ, तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि कसरी उनीहरुलाई सजीलो संग हराउन र सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ।
दुश्मनले के गर्छ र के गलत गर्छ भनेर जान्दै, तपाइँ उसलाई एक फायदा हुनेछ। यो तपाइँको अनुभव मा निर्भर गर्दछ कि लाभ को लाभ लिन को लागी जित्न को लागी सक्षम हुनेछ।
साथै, तपाईका कमजोरीहरू के हुन् पहिचान गर्नुहोस् यसले तपाइँलाई उनीहरुलाई सुदृढ बनाउन र तपाइँलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ, त्यसैले तपाइँको रणनीतिहरु को अध्ययन गर्नुहोस् र उनीहरुलाई हरेक पल्ट मौका दिनुहोस्। यो फरक पर्दैन यदि उनीहरूले तपाइँलाई पहिले सेवा गरिसकेका छन्, पक्कै तपाइँ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
डेल तपाईका विपक्षीहरूको विश्लेषण तपाइँ दुई चीजहरु पत्ता लगाउनुहुनेछ: उनीहरु के मा राम्रो छन् र के उनीहरु मा यति राम्रो छैन। नराम्रो मध्ये हामी पहिले नै आफैलाई व्यक्त; उनीहरुको फाइदा लिनुहोस्। राम्रो चीजहरु सिक्न को लागी राम्रो छ। यो मात्र यो गर्न को रूप मा छ, आदर्श यो तपाइँको रणनीतिहरु र खेल को तपाइँको तरीका को अनुकूलन को लागी, जहाँ तपाइँ शान्त हुनुहुन्छ इलाकामा जारी राख्न को लागी हो।
अन्तमा, पागल कार्य नगर्नुहोस्, तपाइँको रणनीतिमा रहनुहोस् र छोटो अवधिको लक्ष्य सेट गर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाइँ बिस्तारै तपाइँको लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाइँ यी सुझावहरु पालना गर्नुहुन्छ, तपाइँ हुन को लागी नजिक हुनेछ मृत टापु २ मा सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक.
सब थोक तपाइँ राम्रो र दुष्ट २ परे आनन्द उठाउन को लागी जान्न को लागी आवश्यक छ
भिडियो गेम मध्ये एक यो झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ र अधिक उछाल लिनु राम्रो र दुष्ट2परे छ। यो भिडियो खेल तपाइँ एक रमाईलो र मनमोहक अनुभव प्रदान गर्दछ जसको साथ अतुलनीय खेलहरु को विकास गर्न को लागी, चाहे तपाइँ एक शुरुआत हो वा पहिले नै खेल पहिले नै खेल्नुभएको छ।
यसबाहेक, यो गाइड मा जानकारी धेरै उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाइँ भर्खरै राम्रो र दुष्ट २ मा शुरू गरीरहनुभएको छ र एक निश्चित लाभ चाहानुहुन्छ। सिफारिशहरु संग हामी अब तपाइँको लागी छ, तपाइँ एक विशेषज्ञ बन्न सक्नुहुन्न, तर तपाइँ आधारभूत जानकारी पाउनुहुनेछ जुन तपाइँलाई मद्दत गर्दछ
को फ्यान राम्रो र ईभिल पछाडि2खेलको प्रीमियर धेरै चाँडै प्राप्त गर्न तयार भइरहेको छ रिलीज मिति, जुन तपाईं रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ कन्सोल-उपलब्ध। अविश्वसनीय भिडियो खेल संभावनाहरु संग, भिडियो खेल को आगमन सबै समाचार छ कि यो ल्याउनेछ रमाईलो गर्न को लागी सक्षम हुने आशा गरिन्छ।
राम्रो र दुष्ट2परे बाहिर बाहिर उभिन को लागी सुझाव
स्पष्ट रूपमा तपाईलाई केहि दिने उत्तम अवसर हो चाल छ कि यो सजिलो बनाउन को लागी तपाइँ अविश्वसनीय खेलहरु लाई गर्न को लागी जब राम्रो र दुष्ट2परे तपाइँको औंलाहरु मा छ। केही निम्नानुसार छन्।
तपाईको अनुभव बढाउनुहोस् र तपाईको स्तर बढाउनुहोस्। उन्नत र विकसित तपाइँ अधिक अवसर दिनेछ र तपाइँ खेलाडीहरु को बाकी को सम्बन्ध मा एक फायदा हुनेछ। यो कसरी तपाइँ पराजित र तपाइँको कौशल को अतिरिक्त, तपाइँको चरित्र को अवसरहरुमा सुधार हुनेछ।
पत्ता लगाउनुहोस् के राम्रो र दुष्ट2परे तपाइँलाई दिन्छ: यदि केहि तपाइँ एक लाभ दिनुहुन्छ, यो "थाहा छ।" परिभाषित गरीएको छ जुन खेल उपकरण हो र उनीहरु कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ बाधाहरु लाई पार गर्न को लागी खेल मा हुन सक्छ
उपन्यास रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुहोस्: तपाईले बनाउनु भएको छ भने पनि रणनीति जुन तपाईं सन्तुष्ट महसुस गर्नुहुन्छ, सँधै नयाँ चीजहरूको प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंलाई उपयोगी प्राविधिकहरू खोजी गर्ने सम्भावना दिन्छ जसले तपाईंलाई सुधार गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाईंलाई आवश्यक सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्: तपाइँ खेल खेल सेटिंग्स मा आवश्यक छ कि विविधताहरु प्रदर्शन तपाइँ खेल संग सजीलो संग सामना गर्न मद्दत गर्दछ। एक परिमार्जन गर्न को लागी सेटिंग्स को संकल्प, अडियो, नियन्त्रण वा तपाइँलाई अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ कि केहि संग गर्न को लागी हुन सक्छ।
प्लेटफर्महरु जसमा राम्रो र दुष्ट2परे खेलीनेछ
राम्रो र दुष्ट2परे को नयाँ संस्करण सबै को लागी हो, यदि तपाइँ कन्सोल को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ वा तपाइँ पीसी मनपर्छ, खेल विभिन्न रूपहरुमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। कन्सोलको लागि, तपाई यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्लेस्टेशन, Xbox र अन्य, तपाइँलाई घरमा वा प्रयास गर्ने अवसर प्रदान गर्दै अन्य व्यक्तिसँग अनलाइन जडान गर्नुहोस्.
उही तरिकामा यो उपलब्ध हुनेछ क्लाउडमा खेल्नुहोस् कम्प्युटर मा भाप र Stadia जस्तै पृष्ठहरु को उपयोग गरीरहेको छ। यी संग यो मार्केट मा विशेष कन्सोल को लागी विशेष विशेषताहरु संग एक कम्प्यूटर को लागी आवश्यक छैन रमाईलो खेल छ
तपाइँ के रोज्नुहुन्छ तपाइँको प्राथमिकताहरु र तपाइँको बजेट संग अधिक गर्न को लागी हुनेछ। यस तरीकाले तपाइँ सक्नुहुन्छ राम्रो र दुष्ट2फरक संस्करण मा परे पाउन। के खोजिएको छ सबैभन्दा ठूलो सम्भव दर्शकहरु सम्म पुग्न र खेल को आनन्द उठाउन को लागी र सबै को लागी हो।
त्यस्तै, प्रत्येक संस्करणको मनोरन्जनकारी विकल्पहरू छन् र यसको सम्भावना उपलब्ध गराउँदछ व्यक्तिगत वा समूहहरूमा खेलिरहेको उत्कृष्ट अनुभवको आनन्द लिनुहोस्.
म राम्रो र दुष्ट २ परे किन्न को लागी, म कहाँ जान सक्छु?
पहिलो चरण राम्रो र दुष्ट2परे प्राप्त स्टोर को भ्रमण गर्न को लागी छ जुन तपाइँको घर को नजिक छ, वा एक तपाइँ सधैं जानुहुन्छ। एक पटक तपाइँको खेल को रिलीज मिति आइपुगेको छ, र पछिका दिनहरुमा, तपाइँ यसलाई यसको सबै प्लेटफार्महरुमा उपलब्ध देख्न सक्नुहुन्छ।
यो कुरा हो कन्सोलहरूको लागि खेलहरू जस्तै प्लेस्टेशन, वा Xbox। विशेष गरी, ती सबै प्रशंसकहरु को लागी जो उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको राम्रो भावनाहरु उत्पन्न गर्दछन् तपाइँको मनपर्ने खेल को मूल संस्करण.
जे होस्, तपाई यसलाई केवल भौतिक स्टोरहरूमा प्राप्त गर्नुहुने छैन, तर तपाईले यसलाई भित्र पस्न पनि सक्षम हुनुहुनेछ अनलाइन भिडियो खेल स्टोरहरू वा भित्र अनलाइन प्लेटफार्महरू जसमा तपाईंसँग खरीद गर्न केवल एउटा खाता हुनुपर्दछ।
Si तपाईं यी अनलाइन स्टोरहरूमा खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ समय र काम बचाउनुहुन्छ र तपाइँको खेल तपाइँको घर सम्म पुग्छ, वा तपाइँ एक भर्चुअल संस्करण पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको कन्सोलमा स्थापना गर्नुहोस्।
भिडियो गेम स्टोरहरु बाट बाहेक, त्यहाँ एक सदस्यता प्याकेज अन्तर्गत खेल्ने को विकल्प छ। यस मामला मा, तपाइँ एक खेल आफैं किन्नुहुन्न, तर समय को एक निर्दिष्ट अवधि को लागी खेल को एक विस्तृत विविधता को आनन्द उठाउने अधिकार छ। यो Stadia वा भाप को मामला हो।
यो सेवाको अर्थ छोटो अवधिमा क कम भुक्तान एक मूल भिडियो खेल किन्न को लागी, प्लस यो तपाइँ एक विशिष्ट समय को लागी धेरै शीर्षकहरु को मजा लिन को लागी अनुमति दिन्छ।
कसरी राम्रो र एविल2पछाडि खेल्न सिक्न?
हामी सबै novices को रूप मा शुरू हुन्छ जब हामी केहि नयाँ अनुभव गर्छौं, अघिल्लो अनुभव को बाहेक हामी अन्य पहलुहरु मा छ, शुरू बाट केहि शुरू सधैं एक फरक अनुभव हो, तर शान्त, अभ्यास संग तपाइँ एक विशेषज्ञ बन्नुहुनेछ।
के के अभ्यास एक मास्टर बनाउँछ खेल मा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिक तपाइँ अभ्यास, राम्रो तपाइँ राम्रो र दुष्ट २ को नियन्त्रण र एआई प्रतिक्रियाहरु को परे समायोजित। त्यसैले यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ राम्रो र दुष्ट २ परे मा सबै भन्दा राम्रो को एक हुन, धैर्यता र राम्रो इच्छाले आफूलाई भर्नुहोस्, र लामो समयको लागि अभ्यास गर्नुहोस्।
तपाइँको प्रविधिको विस्तार गर्न मद्दत गर्ने अरू केहि हो आफ्ना विरोधीहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। तपाइँ यो पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि यसले के सही र गलत गर्छ। तपाईंलाई पनि आवश्यक छ तपाइँका विपक्षीहरू कसरी खेल्ने भनेर जान्नुहोस्। चाहे उनीहरु NPCs वा वास्तविक खेलाडीहरु हुन्, उनीहरु सबै आन्दोलन र रणनीतिहरु लागू गर्दछन्, यदि तपाइँ उनीहरुलाई थाहा छ, तपाइँ सजीलै कसरी उनीहरुलाई हराउन र सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
जब तपाइँ पत्ता लगाउनुहुन्छ कि उसको कमजोरीहरु के हो, उसलाई हिर्काउनुहोस् जहाँ यो सबैभन्दा धेरै दुख्छ र उसलाई हराउँछ। एक कदम अगाडी हुनु सधैं एक महान लाभ हो।
जसरी तपाईंले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको विश्लेषण गर्नुभयो, तपाईंले पनि समीक्षा गर्नुहोस् र आफ्नै प्रविधिहरू बुझ्नुहोस् र नतिजा उनीहरु तपाइँलाई दिन्छन्। यदि तपाइँ महान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ पक्कै केहि बिन्दु मा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। दिन प्रति दिन आफ्नो रणनीति को विश्लेषण र तपाइँ कहाँ राम्रो हुन सक्छ पत्ता लगाउनुहोस्।
यसको अतिरिक्त तपाइँका दुश्मनहरूको दोष हटाउनुहोस्, तपाइँ यो पनि ध्यान दिनुहुनेछ कि उनीहरुको शक्ति के हो। तपाइँको खोज मा सबै भन्दा राम्रो हुन को लागी, तपाइँलाई थाहा छ कि प्रत्येक अवसर को लागी कब्जा गर्न को लागी। त्यो मामला जाँदैछ, यो देख्न को लागी चीजहरु अरु को लागी काम गर्न को लागी नराम्रो हुने छैन र उनीहरुलाई तपाइँको खेल को तरीका मा मोल्ड गर्नुहोस्।
अन्तमा, हतारमा कार्य नगर्नुहोस्, तपाइँको रणनीतिहरु संग रहनुहोस् र छोटो अवधिको लक्ष्यहरु सेट गर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाइँ बिस्तारै तपाइँको लक्ष्य सम्म पुग्नुहुनेछ। यदि तपाइँ यी सुझावहरु पालना गर्नुहुन्छ, तपाइँ हुन को लागी नजिक हुनेछ राम्रो र ईभेल २ भन्दा परको सर्वश्रेष्ठ.
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ · सबै अधिकार सुरक्षित · AdraInformatica
90s रेट्रो अर्गानिक थिमहरू · आरएसएस फिड · पहुँच